Fri, Mar 22, 2019 | 13:01:35 NST
ट्विटर आउँदै छ नयाँ रुपमा
मंसिर २४ – ट्विटरमा रमाउनेहरुलाई खुसीको खबर । सन् २०१२ देखि ट्विटर नयाँ रुपमा आउँदै छ । फेसबुक, गुगल र याहु लागयतका सामाजिक सञ्जालले नयाँ डिजाइन सार्वजनिक गरे लगत्तै ट्विटरले पनि नयाँ वर्षसँगै नयाँ र स्टाइलिस डिजाइनमा आउने घोषणा गरेको हो ।
आज खग्रास चन्द्रग्रहण, खाली आँखाले हेर्न सकिने
काठमाडौं, मंसिर २४ – आज बेलुका ३ घण्टा ३३ मिनेट लामो खग्रास चन्द्रग्रहण लाग्दैछ । सन् २०११ को अन्तिम ग्रहणको रुपमा रहेको यो चन्द्रग्रहण नेपाली समय अनुसार बेलुकी साढे ६ बजे शुरु हुने नेपाल खगोलीय समाजले जनाएको छ ।
फेसबुकका ११ रोचक तथ्य
मंसिर १९ – फेसबुक विश्वमा सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिने सोसल नेटवर्किङ साइट हो । सन् २००४ देखि सुरु गरिएको फेसबुक विश्मै गुगल पछि धेरै हेरिने साइटमा पर्छ ।
उडिरहेको जहाजवाट धुवाँ आउदा ....
एजेन्सी, मंसीर १७ : केहि दिन अघि उत्तर अष्ट्रेलियाको लिसमोरबाट सिड्नीका लागि उडेको हवाईजहाजले जब आधा दुरी तय गरेको थियो, जहाजमा यात्रा गरिरहेका एक यात्री बसेको ठाँउवाट धुवा आईरहेको देपछि सो जहाजमा यात्रा गरिरहेका अन्य सबैको होस हवास उड्यो ।
क्षेत्रिय सूचना प्रबिधी सम्मेलन दिल्लीमा
उज्यालो । दिल्ली, डिसेम्बर १ दिल्लीको लोधी रोडमा अवस्थीत इन्डिया ह्याविटाट सेन्टर अहिले मञ्जाले सजिएको छ । बिभिन्न १० देश तथा भारतको ३० भन्दा बढी राज्यबाट आएका सूचना प्रबिधि प्रेमी र प्रयोगकर्ताहरुको जमघटले सेन्टर झकिझकाउ छ । डिजीटल डेभलपमेन्ट फाउन्डसेन र डट अर्गको संयुक्त आयोजनामा भारतको राजधानी दिल्लीमा भइरहेको सूचना प्रबिधि मेलामा डिसेम्बर २ का दिन डिजिटल मन्थन पुरस्कारको आठौ संस्करण पनि घोषण हुदैछ । नेपालबाट इक्वल एक्सेसको मिडिया इनिसिएटिम – मेरो रिपोर्ट डट ...
गुगलको नाम ‘गुगल’ कसरी रह्यो ?
मंसिर १३ — इन्टरनेटमा केही खोज्दै हुनुहुन्छ भने सायद तपाईँ पनि गुगल नै गर्नुहुन्छ होला । अर्थात गुगल सर्चमा खोज्नुहुन्छ । गुगल विश्वमा सबै भन्दा बढी हेरिने वेबसाइट हो । वेब सर्च, डाइरेक्ट्री, वेब ब्राउजर क्रोम, बुक सर्च, जीमेल, ब्लगर, युट्युब लगायतका दर्जन भन्दा बढी उत्पादन रहेको यो कम्पनीको नाम कसरी गुगल रह्यो होला ? कहिल्यै सोच्नुभएको छ ?
एउटा मोबाइलको ५५ करोड !
मंसिर ११ — तपाईँ कस्तो मोबाइल बोक्नुहुन्छ ? काम चलाउने खालको सामान्य सेट लिनु भएको होला । अथवा फोटो खिच्न मिल्ने, जिपिआरएस चल्ने र सामान्य भिडियोसम्म खिच्न मिल्ने खालको । मूल्य सामान्य पाँच दश हजारको । तर विश्वमा यस्ता मोबाइल पनि छन् जस्को मूल्य करोडौँ पर्छ र यस्ता मान्छे पनि छन्, जस्ले करोडौँका मोबाइल बोक्छन् ।
फेसबुकको विकल्प !
मंसिर १० - तपाई फेसबुक चलाउदा दिक्क हुनु भयो वा फेसबुक जस्तै अन्य सामाजिक सञ्जालहरुको खोजीमा हुनुहन्छ भने तपाईकाका लागि यहाँ यहाँ उल्लेख गरिन लागेका केहि सञ्जालहरु उपयोगि हुन सक्छन् । ती साईटहरुमा तपाई आफ्ना साथीभाईसँग दैनिकी, समाचार, फोटो, फाईल आफुले चाहे अनुसार आदान प्रदान गर्नसक्नु हुन्छ ।
ब्ल्याकबेरीको टच ९८६० बजारमा
काठमाडौं, मंसिर ९ — ब्ल्याकबेरीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता टेलिटकले नयाँ मोडेलको ब्ल्याकबेरी स्मार्ट फोन नेपाली बजारमा भित्र्याएको छ । टच ९८६० मोडेलको यो नयाँ सेटको स्क्रिनमा नै कीबोर्ड छ ।
१७, ००० कर्मचारीको जागिर संकटमा
नोकीया–सेइमेन्स कम्पनी सञ्जामा कार्यरत १७, ००० कर्मचारीको जागिर संकटमा परेको छ । नेटवर्क पुर्वाधारको क्षेत्रमा संघर्षरत बिक्रेता नोकीया–सेइमेन्सले बिश्वभरीमा रहेका आफ्नो कर्मचारीमध्येबाट १७ हजारलाई कटौती गर्ने योजना सार्वजनिक गरेपछि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको जागिर संकटमा परेको हो ।
'बफी' आउने भो!
काठमाण्डौ, मंसिर ६ - आफ्नो फोनमा प्राय कम्युटरले गरेजस्तै काम गर्न चाहने तथा लोकप्रीय अनलाइन सामाजिक सञ्जाल चलाउने सूचना प्रबिधीप्रेमीहरुका लागि फेरी एउटा खुशीको खबर, फेसबुकले पनि फोन ल्याँउदैछ । आइफोन ४एसको अहिलेसम्म सर्वाधिक रुचाईको स्मार्टफोन हो जसलाई एप्पलले केही महिना अगाडि सार्वजनिक गरेको थियो ।
एप्पल आइट्युन्स्लाई गुगलको धावा
द इकोनोमिस्ट, सानफ्रान्सिस्को । नोभेम्बर १९ - सन् २००१ मा आइपड बनेको थिएन भने सायदै त्यसको दुईबर्षपछि एप्पलले आइट्युन्स् संगीत भण्डारको शुरुवात गर्ने थिएन होला । यदी दुबै नभएको भए एप्पल आज बिश्वमा बार्षिक ६.३ बिलीयन डलर बराबरको डिजिटील म्युजिक कारोबारमा सफल हुने थिएन होला । तर आउने दिनभने आइट्युन्स्को एकछत्र राज जोगाउन एप्पललाई चुनौतीपुर्ण हुने संकते देखापरेकोछ ।
रविराज बराल/ उज्यालो । काठमाडौं, मंसिर ४ — प्रमुख दलका नेताहरु सञ्चार माध्यममा खुब छाउँछन् । सञ्चार माध्यममा सँधैजसो समाचार बन्ने प्रमुख दलहरुका आफ्नै वेबसाइट भने निकै कममात्र अपडेट हुने गर्छन् । आफ्ना गतिविधि सबैजसो सञ्चार माध्यमा पठाएर समाचार बनाउने दलका आफ्नै वेबसाइटमा भने ति गतिविधि कहिल्यै अद्यावधिक हुँदैनन् ।
दुई दिनदेखि टेलिफोन सेवा अवरुद्ध
जाजरकोट, कात्तिक ३० - जाजरकोट र रुकुममा दुई दिनदेखि टेलिफोन सेवा अवरुद्ध भएको छ । ल्याण्डलाईन र मोवाईलको जिएसएम तथा सिडिएमए सेवा मंगलवारदेखि अवरुद्ध हुदा यस क्षेत्रका सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् ।
भारतमा इन्टरनेट प्रयोग गर्नेको संख्या १० करोड नाघ्यो
कात्तिक २२ - भारतमा इन्टरनेट प्रयोग गर्नेको संख्या १० करोड नाघेको छ र्।र् इन्टरनेट एण्ड मोबाईल एशोसियसन अफर् इण्डियाले गरेको र्सर्वेक्षणमा एक महिनापछि इन्टरनेट प्रयोग गर्नेको संख्या १२ करोड नाघ्ने देखिएको भारतीय संचार माध्यमहरुले जनाएका छन् । सेप्टेम्बर महिनासम्म ११ करोड २० लाखले इन्टरनेट प्रयोग गरेको पाइएको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पश्चिम रोल्पामा स्काई तथा सिडिएमए मोवाईल अवरुद्ध
रोल्पा, कात्तिक ६ — पश्चिम रोल्पाको राँकमा रहेको स्काई टावरमा केही दिन देखि खराबी आएपछि सिडिएमए र स्काई मोवाइल अवरुद्ध भएको छ । स्काई टावरमा खराबी आएपछि पश्चिम रोल्पाका अधिकांश गाविस र रुकुम जिल्लाका पूर्वी भेगमा मोबाइल सेवा अवरुद्ध बनेको हो ।
फेसबुकको भाइ नेपालमै जन्मियो
काठमाडौं, कात्तिक १ - फेसबुकको जस्तै सूविधासहितको पहिलो नेपाली समाजिक संजाल मेरो पोष्ट डटकमको सुरुवात भएको छ । फेसबुककै सुविधा दिने भएकाले यसलाई फेसबुकको भाइ भने पनि फरक पर्दैन । काठमाण्डौंमा मंगलवार पत्रकार सम्मेलन गरी मेरोपोष्टका संस्थापक अध्यक्ष सुनिल चौलागाईंले दिएको जानकारी अनुसार दुई वर्षको लगातारको प्रयासबाट यसको सुरुआत गरिएको हो ।
चट्याङ्ग सुरक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सकियो
कपिल कोईराला/ उज्यालो । काभ्रे, असोज २७ — विभिन्न १८ देशका वैज्ञानिकले तीन वुँदे घोषणापत्र जारी गर्दे चट्याङ्ग सुरक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सकिएको छ । काभ्रेको धुलिखेलमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले उर्जा, सञ्चार, यातायात, भौतिक संरचना, पुरातात्वीक महत्वका संरचनाहरु, सरकारी तथा नीजि भवन, सञ्चार र सुरक्षाका लागी टावर जडित भवनहरु आदिमा चट्याङ्ग सुरक्षाका निम्ति हाल भैरहेको मापदण्ड परिमार्जित सहित लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
चट्याङ्ग सुरक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन काभ्रेमा शुरु
कपिल कोईराला/ उज्यालो । काभ्रे, असोज २५ - चट्याङ्ग सुरक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन काभ्रेको धुलिखेलमा शुरु भएको छ । बुधबारबाट शुरु भएको सम्मेलन तीन दिन सम्म चल्ने छ ।
एप्पलका संस्थापक स्टिभ जब्सको निधन !
सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा नयाँ उत्पादन र्सार्वजनिक गर्दै आएको संस्था एप्पलका संस्थापक मध्येका एक स्टिभ जब्सको निधन भएको छ । प्रविधिको क्षेत्रमा आईफोनपछि आईप्याड र्सार्वजनिक गरेर नयाँ युगको घोषणा गरेका ५६ वर्षर्य जब्स लामो समयदेखि क्यान्सरको विरामी हुनुहुन्थ्यो । जब्सको निधनसँगै सूचना प्रविधिको एउटा युग समाप्त भएको छ । पर्सनल कम्प्यूटरदेखि माउस सम्मका परिकल्पनाकार जब्सले २१ वर्षो उमेर एप्पलको स्थापना गर्नुभएको थियो । जब्सको निधनप्रति धेरैले दुः ख व्यक्त गरेका छन् । सूचना प्रविधिका सम्राट मानिएक...
ठमेल 'वाई-फाई जोन'
काठमाण्डौं, असोज १० | मुलुकको सबैभन्दा बढी पर्यटकीय चहलपहल हुने क्षेत्र ठमेल मंगलवारदेखि 'वाई-फाई जोन' भएको छ । पर्यटन दिवसको अवसर पारेर ठमेल क्षेत्रलाई 'वाई-फाई जोन' घोषणा गरिएकॊ हो ।
मुसाको घर कम्प्युटर !
निमेन्द्र शाही/ बाजुरा, असोज ८ — कम्प्युटरसँग मानिसको लगाव हुनु नौलो कुरा होइन तर बाजुरामा मुसाको कम्प्युटरसँग यति लगाव बढेको छ कि हुलाक कार्यालयका मुसा कम्प्युटर भित्रै बस्छन् ।
विद्यालयमा मोबाईल र श्रृङ्गारका सामग्री निषेध
दमन राई/ खोटाङ, असोज ७ — खोटाङको दोर्पाचिउरीडाँडा स्थित अन्नपूर्ण माविमा विद्यार्थीलाई मोबाईल सहित बिद्यालय प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । विद्यार्थीहरुले कक्षाकोठा भित्रै मोबाईल खेलाउने, भिडियो हेर्ने, गीत बजाउन थालेपछि विद्यालयमा मोबाईल निषेध गरिएको हो ।
फेसबुकमा कमेन्ट गर्दा जागिर चट
फेसबुकमा कत्तिको खुलेर कमेन्ट गर्ने बानी छ ? होस गर्नुहोला फेसबुकले गर्दा जागिर नै जान पनि सक्छ । फेसबुकमा विचार व्यक्त गरेकै कारण भारतमा दुई जना कर्मचारिलाई सेवाबाट निलम्बन गरिएको छ ।
कस्को आम्दानी कति ?
हामीले हरेक दिन चलाउने फेसबुक, गुगलको बार्षिक आम्दानी कति होला ? फेसबुक, गुगल, अमाजन जस्ता केहि वेवसाईटहरुको बार्षिक होईन प्रति सेकेण्ड आम्दानी नेपालीको औषत बार्षिक आम्दानी भन्दा धेरै छ ।
सफ्टवेयर डाउनलोड गर्ने उत्कृष्ट १० साइट
यो जमाना ओपन सोर्स सफ्टवेयरको हो । विभिन्न सफ्टवेयर, कम्प्युटर गेम, डा्रइभर, गीतसंगीत सुन्न तथा भिडियो हेर्नका लागि मिडिया प्लेयर आदि किनिरहनु पर्दैन ।
फेसबुकमा रमाउने बढे
काठमाण्डौं, भदौ ३१ । तपाइँ फेसबुक कत्तिको चलाउनुहुन्छ ? कार्यालयमा होस वा घरमा इन्टरनेटमा बस्ने वित्तिकै सबैभन्दा पहिला तपाईँले खोल्ने वेभसाइट कुन हो ? यदि यसको उत्तर फेसबुक हो भने सोच्नुस त, तपाईँ जस्तै फेसबुकमा रमाउने मान्छे नेपालमा कति होलान् ?
आजदेखि क्यान सफ्ट्टेक शुरु
काठमाडौं, भदौ २९ — काठमाडौंमा आजदेखि क्यान सफ्ट्टेक शुरु हुँदैछ । नेपालमै बनेका कम्प्यूटर सफ्टवेयरको प्रर्वद्धन गर्ने उद्धेश्यले कम्प्यूटर एशोशिएसन अफ नेपालले मेला आयोजना गरेको हो ।
गुनोसो सुन्न प्रधानमन्त्रीको नयाँ ईमेल आइडी
काठमाडौं, भदौ २८ — प्रधानमन्त्रीलाई केही भन्न मन छ ? वा सरकारलाई केही सुझाव छन् ? अथवा देश परिवर्तनका लागि तपाईँसँग केही नयाँ विचार छ ? प्रधानमन्त्रीलाई ईमेल गर्नुस ।
गुगलको सर्भर नेपालमै
काठमाडौं, भदौ २५ - चर्चित सर्च इन्जिन गुगलले नेपाल टेलिकमसँग मिलेर नेपालमै सर्भर राखेको छ । अहिले यो सर्भरको परीक्षण भैरहेको छ । नेपाल टेलिकमको जावलाखेलस्थित कार्यालयमा गुगलको क्याचे सर्भर राखेर टेलिकमले परीक्षण गरिरहेको छ ।
टि्वटरका १० करोड क्रियाशिल सदस्य
काठमाडौं, भदौ २३, तपाई टि्वटरमा हुनुहुन्छ ? हुनहुन्छ भने तपाईले टि्वट पनि गर्नुभएकै होला ? तर यति तपाई टि्वटरमा हुनुहुन्न अथवा भएर पनि टि्वट गर्नुहुन्न भने तपाईले टि्वटर प्रयोग गर्ने १० करोडमा पर्नुहुन्न । ७ जना सदस्यबाट ५ वर्षहिले सुरु भएको माइक्रो ब्लगिङ्ग साइट टि्वटरले आफ्नो क्रियाशिल सदस्यको संख्या १० करोड पुगेको घोषणा गरेको छ ।
प्रवेश परीक्षाको उत्तर पुस्तिकाको परीक्षण कम्प्यूटरबाट
काठमाडौं, भदौ २२ - अब कम्प्युटरबाटै उत्तर पुस्तिका परिक्षण गर्न सकिने भएको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् सिटिइभिटीले यसवर्षेखि प्रवेश परीक्षाको उत्तर पुस्तिकाको परीक्षण कम्प्यूटरबाट गर्न शुरु गरेको छ ।